WIC waa hooyada ugu fiican saaxiibkeed. Waa barnaamij nafaqo oo dheeri ah oo loogu talagalay haweenka, dhallaanka, iyo carruurta, iyo inbadan! Helitaanka faa'iidooyinka WIC hadda way fududaatay: Kaararka cusub ee Louisiana eWIC iyo barnaamijka WICShopper ayaa ka dhigaya dukaameysiga mid sahlan oo ka sahlan. Hel talo bixinnada wax iibsiga, cuntooyinka iyo waxyaabo kale oo fudud iyo xiiso u leh quudinta qoyskaaga.
Adeegyada WIC ee Louisiana
Sannadkii 2019, Louisiana WIC waxay ka beddeshay foojarrada warqadda ah kaarka cusub ee kaarka WIC! Tani waxay ka dhigi doontaa habka lacag bixinta mid la mid ah noocyada kale ee bixinta kaarka ku saleysan.
Fadlan daawan fiidiyowyada hoose oo weydii shaqaalahaaga WIC goorta kaararka eWIC ay imaanayaan xafiiska WIC ee deegaankaaga!
Ku soo dhowow Louisiana eWIC!
Ku soo dhowow Louisiana eWIC! (isbaanish)
Isticmaal "Soo hel xafiiska WIC”Badhanka barnaamijka WICShopper si loo helo rugta caafimaad ee ugu dhow
Oggol - Alaabtaan waxaa loo oggol yahay WIC. Waa hab fiican oo lagu ogaado in cuntada WIC la oggol yahay iyo in kale. Hal shay oo ah in la ogaado waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin kuma jirto faa'iidooyinkaaga cuntada ee WIC, marka ma iibsan kartid WIC. Ilaa faa'iidooyinka WIC ay ku xirmaan barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" waxaa laga yaabaa inaan lagu dabakhin dheefaha qoyskaaga. Tusaale ahaan, cunug hal sano jir ah ayaa hela caano dhan. Haddii aadan ku haysan cunug hal sano jir ah qoyskaaga, caanaha oo dhan kama mid noqon doonaan faa'iidooyinkaaga cuntada WIC, mana awoodi doontid inaad ku iibsato caanaha oo dhan barta jeegga.